जनवरी 8, 2019 जनवरी 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment रावण, लक्ष्मण, शिक्षा
रावणले मर्ने बेलामा लक्ष्मणलाई सिकाएका तीन महत्वपर्ण शिक्षाहरु ! रामायणको एउटा प्रसङग छ, रामको तीरले घाइते रावण जो युद्धभूमिमा अन्तिम साँस लिइरहेका थिए, रामले लक्ष्मणलाई रावणसँग नीति ग्रहण गर्न अनुरोध गरे । रामले लक्ष्मणलाई भने कि ‘यो पृथ्वीले फेरि कहिले पनि नपाउने महाविद्वान, महापराक्रमी रावणसँग जीवनका सत्य सिकेर आउ । राजपाठ बुझेर आउँ ।’ धार्मिक कथा यस्तो छ, जब रावणको मृत्यु लगभग निश्चित भएको थियो, श्री रामले लक्ष्मणलाई भने कि, ‘यी ज्ञानीको ज्ञान लिएर आउँ ।’लक्ष्मणले यो कुरो बुझेनन् तर दाइको आदेश अनुसार मरणासन्न रावणको टाउकोतिर उभिएर आफ्नो अभीष्ट बताए । रावणले केही प्रतिक्रिया देखाएनन् । लक्ष्मण रन्थनिंदै फर्केर आए । रामले लक्ष्मणलाई उनको व्यवहारगत त्रुटि आभास गराएर रावणको चरणतर्फ गएर आग्रह गर्न भने । लक्ष्मणले त्यस्तै गरे। प्रकाण्ड पण्डित रावणले त्यसपछि आफूसँग भएको अथाह ज्ञान लक्ष्मणलाई सुम्पे । यो नै वास्तवमा शिष्टाचार हो ।
← जाडोमा सुन्तला खानुका फाइदाहरु
रावणका १० गुणहरु र अवगुणहरु →
रावणका १० गुणहरु र अवगुणहरु
जनवरी 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
One thought on “रावणले मर्ने बेलामा लक्ष्मणलाई सिकाएका तीन महत्वपर्ण शिक्षाहरु ”
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् दश शिर भएका रावणका १० गुणहरु र अवगुणहरु